‘Humni Nageenya kabachiisu Malkaa Sooddaatti Nama Tokko Ajjeesee Tokko irraa Balaa Geessise’ – Jiraattota
Ebla 24, 2019
Godina Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Sooddaatti humni naga kabachiistota mootummaa jiraattotarraan balaa geessisuu jiraattonni himan.
WIxata darbe kana Malkaa Soodaa ganda Daayaa Daawwaa jedhamu keessatti humni mootummaa nama tokko ajjeesee tokko ammo madeessuu jiraattonni Sagalee Ameerikaaf himan. Bulchiinsi Godinichaa deebii itti kennee jira; Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka jiraattonni Malkaa Soodaa jedhanitti namootni human naga kabachiistota mootummaan miidhaan irra dhaqqabe jedhaman lama. Jiraattonni ganda baadiyyaa aanichaa Daayaa Daawwaa yoo dubbatan tarkaanfii fudhatamee jedhame kanaan Obbo Nugusuu Bedeechaa yoo du’andargaggoon Duubee Eddoo jedhamu ammoo rukutamee hospitaalatti yaala fudhataati jira.
Obbo Burqaan jiraataa ganda Sanaa yoo ta’an miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana geessisan jedhanii himan dhiyeenyatti gandoota baadiyyaa sana keessa qubatanii akka jiran dubbatan. Ka’umsi tarkaanfii kanaa maalii jedhee dabalataan Obbo Burqaa gaafadheen ture. Jiraataan kun humni naga kabachiistotaa mootummaa kun jiraattota naannoo mirgallee sarbaa jiruu jechuunis dabalanii himatu.
Hoogganaan Waajjira Bulchiinsaaf nageenya gujii lixaa malkaa sooddaatti namarra miidhaan dhaqqabuu himanii eenyu akka ta’e garuu adda hin baafannee jedhan. Bulchaan Gujii Lixaa Obbo Abarraa Bunnoos waa’ee dargaggoo ammas human naga kabachiistotaan rukutame jedhamee fi komii jirattonni malkaa humni nageenyaa mirga nu sarbaa jira jedhan seera kabachiisuu male ka biroo waan raawwate hin qabu jechuun deebisan.
Obbo Abarraan Malkaa Sooddaas tahe gujii lixaa bakka kaanitti seeraa ala nami to’annoo jala oole hin jiruu jechuunillee dubbatan.
Kolonel Gammachuu Ayyaanaa irratti Himannaan Hin Dhiyaanne: Abukaatoo
Barsiisaa fi Leenjisaa Jalqaba Magaalaa Naqamteetti Isportii Hundeessan
Har'a Magaalaalee Oromiyaa Adda Adda Keessatti Hiriirri Mormii Geggeeffamee
Afrikaa Kibba Bahaa fi Obomboleetti Mudachuuf Jiru
AngawoonniDirree Dawaa Hawaasa Waliin Marii Gaggeessan